Nidaamka iftiinka-taraafiga ayaa joojiyay saddex-meelood laba meelood dadka Ingiriiska inay aadaan dibadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Nidaamka iftiinka-taraafiga ayaa joojiyay saddex-meelood laba meelood dadka Ingiriiska inay aadaan dibadda
Iyadoo meesha laga saarayo heerka amber-ka, ka tagaya kaliya casaan iyo cagaar. Waa la arki doonaa in tallaabadani ay kalsooni gelin doonto dadka British-ka ah ee doonaya inay dibadda u safraan fasax.
Saddex meelood laba meel dadka Ingiriiska ah waxay ku eedeeyaan nidaamka nalka taraafiggu go'aankooda ah inaysan qaadan fasaxa dibadda sannadkii la soo dhaafay, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1-da Noofambar) soo saartay WTM London.
Kuwa aan fasaxa ugu safrin dibadda 12 bilood ee la soo dhaafay, 66% ayaa ku jawaabay 'haa' su'aasha: Nidaamka iftiinka taraafigga ee ay soo bandhigtay dawladda UK ee socdaalka dibadda ayaa kaa saaray safarka dibadda sannadkii u dambeeyay?
Markii la soo bandhigay, nidaamka nalka taraafikada waxaa lagu amaanay inuu yahay hab si sahlan loo fahmi karo oo ay dowladdu ku qiimeyneyso meelaha loo aadayo iyadoo loo eegayo tirakoobka Covid, oo ay go'aamiso in dadka soo galaya UK ay tahay inay karantiiliyaan iyo in kale.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dhowr jeer oo meelo loo aadi jiray loo cel-celiyay cambar ama casaan, taasoo keentay fowdo ka dhex dhacday dadka fasaxa qaata oo inta badan la siiyay 48 ama 72 saacadood si ay guriga ugu soo laabtaan, ama ay baajiyeen qorshahooda. Intaa waxaa dheer, Dawladdu waxay soo bandhigtay heer dheeri ah - liiska 'watch green', ee meelaha loo aadayo khatarta ah inay isu rogaan amber.
Jawaab bixiyaasha ayaa u sheegay Warbixinta Warshadaha ee WTM Hubanti la'aanta nalka taraafiggu ay hakisay safarka 12-kii bilood ee la soo dhaafay.
"Boris Johnson ma samayn karo maskaxdiisa hal daqiiqo ilaa ku xigta waxa wadamadu yihiin midabkee. Hadda ma istaahisho in aad dibadda u safarto,” ayuu yiri mid ka mid ah dadka la waraystay.
Mid kale ayaa sharraxay: "Ma doonayo inaan lacag ku bixiyo baaritaanka COVID oo aan ku dhego gudaha gudaha si aan u karantiilo."
"Waxay isbeddeshaa ogaysiis daqiiqad ah, aad ayayna u jahawareersan tahay - Dawladdu waa ceeb, mana garanayso waxay samaynayso. Boris wuxuu ka rogaa go'aan si xun looga fikiray oo u guuray mid kale, "jawaab kale ayaa yidhi.
Mid afraad ayaa sharxay inay damiyeen nidaamka nalka taraafigga: "Sababtoo ah waxay beddelaan nidaamka ogeysiis la'aanba si aad u suurtowdo inaad go'doomiso ogeysiis la'aan."
Mid ka mid ah kuwa soo haray saddexdii qof ee Ingiriis ah ee aan fasaxa dibadda u bixin 12-kii bilood ee la soo dhaafay, qaar ayaa sheegay in aysan ammaan ka dareemayn safarka.
"Waa khatar aad u sareysa sidaas darteed waxaan doortay inaad sugto. Ma aha nidaamka nalka taraafiggu, ee waa Covid kan na joojiyay,” ayuu yidhi mid ka mid ah.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: "Nidaamka iftiinka taraafikku waxaa loogu talagalay qaab la fududeeyay ee nidaamka marinka safarka ee 2020 - laakiin dhab ahaantii, wuxuu noqday mid aad u adag, laga yaabee si ka sii badan.
"Shirkadaha diyaaradaha, hawl wadeenada iyo meelaha ay ku socdaalayaan ayaa si joogto ah uga naxay la'aanta wadamada liiska cagaaran ku jira waxayna ahayd in ay si degdeg ah wax u qabtaan marka waddamadu kor u qaadaan ama hoos u dhigaan darajooyinka iftiinka taraafigga, inta badan ogeysiis gaaban.
"Intaa waxaa dheer, liiska nalka taraafiggu wuu ka duwan yahay hagidda Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo-sooranka iyo Horumarinta (FCDO) ee ku saabsan safarka meel gaar ah, sidaas darteed dadka safarka ah waxay u baahdeen inay hubiyaan labadaba. Si loo daro dhibaato kale, wadamada liiska cagaaran maaha, ama ma ahayn, daruuri u furan Brits, markaa nidaamka oo dhan wuxuu noqday mid jahawareer cajiib ah.
"Iyadoo la saarayo heerka amber-ka, oo ka tagaya casaan iyo cagaar. Waa la arki doonaa in tallaabadani ay kalsooni gelin doonto dadka British-ka ah ee doonaya inay dibadda ugu safraan fasaxa.”